Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.2.2 badnaa-sireed ee manifestos siyaasadeed
Si la mid ah Galaxy Zoo, waxaa jira xaalado badan oo cilmi-baarayaasha bulshada ay doonayaan in ay codeeyaan, kala soocaan, ama ku calaamadiyaan sawir ama gabal qoraal ah. Tusaale ka mid ah cilmi baaristan ayaa ah codaynta muujinta siyaasadda. Inta lagu jiro doorashooyinka, xisbiyada siyaasaddu waxay soo saaraan war cad oo sharxaya jagooyinka siyaasadeed iyo falsafooyinka hogaaminaya. Tusaale ahaan, halkan waa qayb ka mid ah muujinta Xisbiga Shaqaalaha ee Boqortooyada Ingiriiska laga soo bilaabo 2010:
Tusaalooyinkaas waxaa ku jira macluumaad qiimo leh oo ku saabsan cilmi-baarayaasha siyaasadda, gaar ahaan kuwa baranaya doorashooyinka iyo astaamaha doodaha siyaasadda. Si nidaam ahaan loo soo saaro xogta ka soo baxday bandhigyadaas, cilmi baarayaashu waxay abuurtay Mashruuca Manifesto, kaas oo soo ururiyay 4,000 oo bandhigyo ah oo ku dhowaad 1,000 kooxood oo ka kala socda 50 waddan kadibna waxay abaabulay aqoonyahanno siyaasadeed si ay si nidaamsan u codeeyaan. Jumlad kasta oo muujinaysa sheeko kasta waxaa ku qortay khabiir isagoo isticmaalaya nidaam 56-qaybood. Natiijada dadaalkan wada-shaqeyntu waa dataset weyn oo soo koobaya macluumaadka ku jira muraayadahan, iyo tirakoobkani waxa lagu isticmaalay in ka badan 200 oo waraaqo cilmi ah.
Kenneth Benoit iyo asxaabtey (2016) go'aansadeen in ay qaataan hawsha cod-bixinta ee horey u soo qabtay khabiiro ayna u gudbinayaan mashruuca xisaabinta aadanaha. Natiijo ahaan, waxay abuureen nidaam qaylo dhaan ah oo ah mid aad u tarjumaya oo jilicsan, oo aan lagu sheegin raqiis iyo dhaqso.
Iyada oo la shaqeyneysa 18 bandhig oo lagu abuuray lixdii doorasho ee ugu dambeeyay ee Boqortooyada Ingiriiska, Benoit iyo asxaabtu waxay adeegsadeen istaraatijiyado kala geddisan oo isku-dhafan oo la shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya suuqa shaqada ee mikrotask (Amazon Mechanical Turk iyo CrowdFlower waa tusaalooyinka suuqa shaqada ee microtask; , fiiri Jabtar 4). Cilmi-baadhayaashu waxay qaateen sheeko kasta waxayna u kala qaybiyeen jumlado. Marka xigta, qof ayaa codsiga nidaamka codsiga u rogay jumlad kasta. Gaar ahaan, akhristayaasha waxaa la waydiiyay inay kala soocaan weedh kasta oo ka hadlaya siyaasadda dhaqaalaha (bidix ama midig), siyaasadda bulshada (liberal or conservative), ama midna (shaxda 5.5). Xukun kasta waxaa lagu qeexay ilaa shan qof oo kala duwan. Ugu dambeyntii, qiimeyntan ayaa la isku daray iyadoo la isticmaalayo habka tirakoobka oo lagu xisaabtamayo saamaynta shaqsiyadeed ee labadaba iyo saameynta adag ee jumlada. Dhammaan, Benoit iyo asxaabtu waxay ururiyeen 200,000 qiyaasood oo ka yimid 1,500 qof.
Jaantuska 5.5: Nidaamka Cod-bixinta ee Benoit et al. (2016) . Akhristayaasha ayaa la waydiiyay inay kala soocaan weedho kasta oo ku saabsan siyaasadda dhaqaalaha (bidix ama midig), siyaasadda bulshada (liberal or conservative), ama midna. Laga soo bilaabo Benoit et al. (2016) , sawirka 1.
Si loo qiimeeyo tayada dadka codsanaya, Benoit iyo asxaabtu waxay sidoo kale lahaayeen ilaa 10 khabiir oo kala ah Professors iyo ardayda qalin-jabinta sayniska siyaasadeed-qiimeyn isku mid ah iyada oo la adeegsanayo nidaam la mid ah. Inkasta oo qiimeynta xubnaha ka tirsan dadku ay aad uga badnaayeen qiimeynta khubarada, qiimaynta dadka soo qanciyay waxay lahaayeen heshiis qoto dheer oo leh qadarinta khabiirka fikradda (shaxda 5.6). Isbarbar dhigidu waxay muujinaysaa, sida Galaxy Zoo, mashaariicda xisaabinta bani'aadamka waxay soo saari karaan natiijooyin tayo sare leh.
Jaantuska 5.6: Qiyaasaha khubarada ah ( \_(x\_) -axis) iyo qiyaasta dadka qiyaasaya ( \_(y\_) -axis) waxay ku jireen heshiis qoto-dheer markay codsadeen 18 xafladood oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska (Benoit et al. 2016) . Calaamaduhu waxay ahaayeen kuwo ka socda saddex xisbi (Konserfatif, Shaqaale, iyo Dimuqraadiyadeed) iyo lix doorasho (1987, 1992, 1997, 2001, 2005, iyo 2010). Laga soo bilaabo Benoit et al. (2016) , sawirka 3.
Dhisidda natiijadan, Benoit iyo saaxiibadaa waxay adeegsadeen nidaamka cod-bixinta ee cod-bixinta oo aan suurtagal ahayn nidaamka cod-bixinta ee khibrad u leh mashruuca Manifesto. Tusaale ahaan, Mashruuca Manifesto ma codeeynin waraaqaha mawduuca socdaalka sababtoo ah maahan mawduuc muhiim ah markii nidaamka codeynta la sameeyay bartamihii 1980-yadii. Iyo, marxaladdan, waa mid si tartiib tartiib ah loogu qaadi karo Mashruuca Muuqaalka si uu dib ugu noqdo oo uu dib ugu soo celiyo warshadahiisa si uu u qabsado macluumaadkan. Sidaa daraadeed, waxay u muuqan doontaa in cilmi-baarayaasha ay xiiseynayaan barashada siyaasadda soogalootigu ayan nasiib lahayn. Si kastaba ha noqotee, Benoit iyo asxaabtu waxay awoodeen inay isticmaalaan nidaamka xisaabinta bani-aadamka si ay u sameeyaan codsigaan-loo habeeyey su'aashooda cilmi-baaris ah-dhakhso ah oo si fudud.
Si loo baro siyaasadda socdaalka, waxay ku calaamadeeyeen bandhigyada siddeed xisbi doorashooyinka guud ee 2010 ee Boqortooyada Ingiriiska. Jumlad kasta oo muujinaysa sheeko kasta waxaa loo qoondeeyay in ay la xiriirto hijradda, iyo haddii ay sidaas tahay, haddii uu ahaa muhaajirnimo, mid dhexdhexaad ah ama ka soo horjeeda socdaalka. 5 saacadood gudahood markii ay bilaabeen mashruucoodii, natiijooyinka ayaa ku jiray. Waxay soo aruuriyeen in ka badan 22,000 jawaabood oo ah qiimaha guud ee $ 360. Waxaa intaa dheer, qiyaasaha ka soo baxay dad badan waxay muujiyeen heshiis la taaban karo oo lala yeeshay sahan hore oo khubaro ah. Kadib, sida imtixaanka ugu dambeeya, laba bilood ka dib, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen dadkoodii-codsiga. Dhowr saacadood gudahood, waxay abuureen dataset dad badan oo cod-bixiye ah oo si dhaw ula-socotay cod-bixiyeyaashoodii hore ee cod-bixinta. Si kale haddii loo dhigo, xisaabinta bani'aadamku waxay u saamaxday in ay soo saaraan codsi siyaasadeed oo lagu heshiiyey qiimeyn khibradeed iyo dib loo soo celin karo. Dheeraad ah, sababtoo ah xisaabinta bini'aadamka waxay ahayd mid deg deg ah oo raqiis ah, waxay ahayd mid sahlan inay ku habeeyaan xog ururintooda su'aalahooda cilmi-baarista ee khuseeya socdaalka.